आममानिसले आफ्नो जीवनको लक्ष्य भेट्न थाहा पाउँनु पर्ने ५ कुराहरु - उज्यालो पाटो
तपाईको जीवनको उद्देष्य के हो भनेर अहिलेसम्म निश्चित गर्न सक्नु भएको छैन ? आफ्नो सामर्थ्य र प्रतिभा कुन बिषयमा छ भनेर खोजिरहनु भएको छ ? तपाईलाई लाग्न सक्छ, यति उमेर भइसक्दा पनि मैले छुट्याउँन सकेको छैन वा जीवनको लक्ष्य तोक्न सकेको छुइन । अथवा, लक्ष्य थाहा भएर वा आफ्नो प्रतिभा चिनेर पनि बाटो पहिल्याउँन सकेको छुइन ।
यस्ता कुराको निक्यौल गर्न नसकेर कति पटक तपाईले आफैलाई बेकार छु भन्नु भएको हुन सक्छ, वा म बेकम्मा वा काम नलाग्ने छु भन्ने निराशाले ग्रसित निष्कर्षमा पुग्नु भएको हुन सक्छ तर खुसीको कुरा, यो सत्य चाहि अवश्य पनि होइन । र, यो तपाईको मात्रै समस्या होइन । साह्रै धेरै मानिसहरु आफ्नो लक्ष्य र उद्देष्य पहिचान गर्न अनि पहिचान भएको लक्ष्य र उद्देष्य पुरा गर्न बाटो खोजेर बसेका हुन्छन् ।
आफ्नो उद्देष्य चिन्न त्यति गाह्रो कुरा पनि होइन । एप्पल कम्पनीका संस्थापक स्टिभ जब्सले भनेका छन् – तपाईले पनि लक्ष्यलाई खोज्नु पर्छ । यो सबै तपाईलाई गर्न मन परेको कुराहरुबाट सुरु हुन्छ । तपाईले जब आफ्नो लक्ष्य भेट्नुहुन्छ तब तपाईले त्यसलाई माया गर्न थाल्नु हुन्छ । तपाईले त्यसका लागि दिएको समय कम भन्ने लाग्छ र तपाई त्यसलाई माया गर्न थाल्नु हुन्छ ।
पक्कै पनि लक्ष्य वा प्रतिभा जे पनि हुन सक्छ । यो चित्रकार, कलाकार, खाना पकाउँने, शिक्षक, वस्तुहरु निर्माण गर्ने वा जटिल गणितिय समिकरणहरु सुल्झाउँने अथवा अरु नै केहि जे पनि हुन सक्छ । तपाईको इच्छा जे सुकै होस्, केहि फरक पर्देन तर तपाई सम्बन्धित बिषयको विशेषज्ञ भने अवश्य बन्न सक्नुहुनेछ । बस्, तपाईमा लगनशिलता भने हुनु पर्दछ ।
जति धेरै तपाई आफ्नो लक्ष्यको बारेमा खोजी गर्न लागि पर्नुहुन्छ, त्यति नै तपाईले धेरै कुरा जान्न सक्नुहुनेछ । त्यति नै तपाईको प्रतिभा निखारिन्छ र त्यति नै तपाई अब्बल झन् अब्बल बन्नुहुनेछ । यसका लागि तपाईले केहि कुरामा विशेष जोड दिनु पर्ने हुन्छ । यहाँ त्यस्तै केहि उपायहरु संकलन गरिएको छ ।
१. आफुमा र लक्ष्यमा विश्वास गर्ने
सबै भन्दा पहिले आफुमा विश्वास हुनु पर्छ । म सक्छु भन्ने सोचाइले तपाईलाई निराश हुन रोक्छ । तर सँधै यस्तो नहुन सक्छ । बेला बेला फरक अवस्थाहरु पनि भोग्न पर्छ । के तपाईले कहिलै कसैको आत्मविश्वास देखेर आफुलाई पनि त्यसै गरि आत्मविश्वास बढोस् भनेर चाहना गर्नु भएको छ ? के तपाईले कहिलै सोच्नु भएको छ कि यसको रहस्य के हो ?
सोच्नुहोस् त, किन केहि व्यक्तिहरु अफ्ठ्यारो समयमा पनि सजिलैसँग आत्मविश्वाससाथ अडिग रहन्छन् ? के उनीहरुमा जन्मजात नै त्यस्तो गुण हुन्छ ? पक्कै पनि जन्मजात गुण मात्र होइन, यस्तो गुण पछि विकाश गर्न सकिन्छ । आफ्नो लक्ष्यप्रति विश्वास राख्ने हो र आफु त्यो लक्ष्यप्रति दृढ रहन्छु भन्ने संकल्प लिने हो भने आफुमा स्वत आत्मविश्वास भरिन्छ ।
२. सिक्नुहोस् र सुधार पनि गर्नुहोस्
यो उपाय आत्मविश्वास बढाउँनका लागि पनि उत्तिकै प्रभावकारी हुन्छ । यदि तपाई आत्मविश्वास निर्माण गर्न चाहनुहुन्छ भने केहि चिजमा राम्रो गर्ने प्रयास गर्नुहोस् । आफ्नो सम्पुर्ण उर्जा एउटा निश्चित क्षेत्रमा आफ्नो अनुभव र विशेषज्ञता निर्माणका लागि दिनुहोस् । सुरुवाती चरण असाध्यै र सबै भन्दा कठिन हुन्छन् तर तपाई त्यो कठिनताबाट केहि सिक्नु हुनेछ । त्यो ज्ञानलाई सुधार गर्नमा प्रयोग गर्नुहोस् । यसले विश्वासको छलाङ्ग लिन र अगाडीका कदम चाल्ने साहस पाउँन एकदमै महत्वपुर्ण हुन्छ ।
३. हामी दोष बिनाको पुर्ण संसारमा बाँच्दैनौँ
हामी दोष बिनाको पुर्ण संसारमा बाचिरहेका छैनौँ । हामी सबैले गल्ति गर्छौँ । हामी गल्तिबाट पाठ सिक्छौँ । तपाई कुनै पनि काम सुरुवात गर्दा केहि पनि गल्ति नगरी गर्न सक्छु भन्ने विश्वास नगर्नुहोस् किनभने तपाई सुरुवातमा हुनुहुन्छ । सुरुवातमा गल्ति हुनु अनुभव पाउँनु हो । अरुले पनि गल्ति गर्छन् । यो सामान्य हो ।
यदि तपाईले कहिलै पनि गल्ति गर्नु हुन्न भने तपाईले नयाँ केहि कुरा पत्ता लगाउँने प्रयास गर्नु भएको छैन । गल्ति स्वभाविक हो । गल्तिहरु देखि डराउँनु हुदैन । तिनीहरुलाई सिक्ने अवसरहरुको रुपमा विचार गर्नुहोस् । ति गल्तिहरुबाट सिक्ने प्रयास गर्नुहोस् ।
४. आफुलाई प्रोत्साहित गर्नुहोस्
आफुलाई भरोसा गर्नुहोस् । अरुले के सोच्छन् त्यसले खास फरक पार्दैन । समय वा परिस्थिति कतिको प्रतिकुल भयो भन्ने कुरा पनि त्यति धेरै महत्वपुर्ण होइन । तपाई आफैसँग ति सबैसँग जुध्न सक्ने र तिनीहरुलाई परिवर्तन गर्न सक्ने शक्ति छ । तपाईले आफुलाई त्यस्ता कुरामा प्रोत्साहित गरिराख्नु पर्छ । आफ्ना प्रतिकुलता र सिमिततालाई बहाना बनाएर रोकिनु हुन्न ।
सबै कुरा प्रतिकुल हुँदा पनि आफ्नो आत्मविश्वास कायम राखेर सकारात्मक नतिजाका लागि प्रयासरत हुन आफुलाई प्रोत्साहित गरिराख्नु पर्छ । जब तपाईले आफुलाई आफैले हौशला दिइराख्नु हुन्छ, तब मात्रै संसारले पनि तपाईमा विश्वास गर्छ । तपाईलाई प्रतिकुलतासँग जुध्न सहज हुन्छ ।
५. नकारात्मकताबाट जोगिनुहोस्
हामी भन्ने गर्छौ, मानिसहरु दुई खालका हुन्छन् । कसैले आधा पानी भएको गीलासलाई आधा रित्तो देख्छ र कसैले आधा भरिएको । यो दृष्टिकोणको कुरा हो । यो दृष्टिकोणले जीवनको बाटो छान्न र त्यसमा हिड्नमा महत्वपुर्ण प्रभाव पार्छ । यसका लागि तपाई आफु सकारात्मक हुने कुरा त छदैछ, नकारात्मकहरुबाट पनि जोगिन सक्नु पर्छ ।
तपाईले नकारात्मकता सजिलै पाउँनु हुनेछ । यो खराब समय वा खराब अवस्थासँग मात्रै सम्बन्धित कुरा होइन । नजिक भनिएका मानिसहरुबाट पनि तपाईले नकारात्मकता सिकिरहेको हुन सक्छ । कसैको नकारात्मकताले तपाईलाई ग्रस्त बनाइराखेको हुन सक्छ । म नयाँ काम सुरु गर्छ् भनेर तपाईले कसैलाई सुनाउँदा तपाईले प्रतिक्रियामा के पाउँनु हुन्छ ? कसैले नतिजा राम्रो हुने बताउँछन् र कसैले बाटोमा आइपर्ने कठिनाइका मात्रै कुरा गरेर तपाईलाई हतोत्साहित पार्छन् । यस्तोमा नकारात्मक सोच भएका व्यक्तिहरुलाई आफुलाई टाढा नै राख्नुहोस् । तपाई यसको लागि राम्रो हुनु हुनेछ ।
‘गेम अफ थ्रोन्स’ पुस्ताले महाभारतबाट यी कुरा सिक्न सक्छन्